LISENETHINI!: Iyasihlaza lento yeRoyal AM neSekhukhune, kumele ixazululwe ngokushesha - Impempe
LISENETHINI!: Iyasihlaza lento yeRoyal AM neSekhukhune, kumele ixazululwe ngokushesha
May 25, 2021 May 25, 2021 Impempe.com
Abadlali beRoyal AM
UDABA: Thulisile Miya
Kule mpelasonto edlule njengoba bekusongwa imidlalo yeGladAfrica Championship sibone imihlola into esingaze siyibone. Lutho ukuphakanyiswa kwendebe yize isizini isiphelile. Okumangaze kakhulu ukuvela kwesitatimende sePremier Soccer League (PSL) sicacisa ukuthi akekho ozonikezwa indebe ngoba kusahanjiswana izinkantolo.
Lokhu kulandela ukuthi iSikhukhune United sikholelwa ukuthi kunamaphuzu amathathu okumele iwathole bhusende ngemuva kwecala abalifakile futhi umphumela walo wavuna bona. Kodwa iPSL yasiphikisa leso sinqumo osekudale ukuthi kungacaci ukuthi yiliphi ngempela iqembu elizonyuselwa esigabeni esikhulu phakathi kwalamaqembu. IRoyal AM ihlezi phezulu ngamaphuzu angu-51 bese kuthi emuva kwayo kukhona iSihukhune United ngamaphuzu angu 50.
Lokhu kudideka kufakazelwa ukuthi emuva kokuphela kwemidlalo womabili amaqembu abejabula ngoba ekholelwa ukuthi asengenile esigabeni esikhulu sePSL. Mina bengiqala ukubona into enje. Angazi kungani iPSL ishawa induku eyodwa unyaka nonyaka.
Abadlali beSekhukhune United
Njalo uma sekusongwa iligi kuhanjiswana izinkantolo. Kungani belinda kuze kufike umdlalo wokugcina ngaphambi kokuthi balungise izinkinga ezifana nalezi?
Phela leli cala leSikhukhune kuyavela ukuthi lafakwa kuqala unyaka. Ngabe siyibonile indebe iqukulwa izolo ukube izinto bazenza kusenesikhathi. Lahamba likhala liyoshona ehlathini iqembu laseKapa i-Ajax Cape Town nayo yayingenelisekile ngesinqumo sokuphucwa amaphuzu ngemizuzu yokugcina ngomunye unyaka.
Okubi kakhulu nje ngalesi sigameko esenzeke ngeSonto ukuthi sicekela phansi isithunzi sebhola lethu neseligi yethu ebalwa namakhulu emhlabeni. Kuzoba nzima nokuthi kusondele abaxhasi ngoba phela kuyacaca ukuthi kuyasehlula ukulawula ibhola ngendlela egculisa wonke muntu.
Umhlaba uzibonile izithombe la iRoyal AM neSikhukhune bebebhiyoza bejabulela indebe eyodwa. Ihlazo nje leli. Kuzomele ngesizini ezayo basigweme lesi simo ngoba simbi. Ngisilindele ngamehlo abomvu isinqumo esizophuma ngoba phela ekugcineni kuzomele iphakanyiswe indebe.
UThulisile Miya ungumsakazi owethula imidlalo bukhoma Okhozini FM. Lona ngumbono wakhe awuhlangene nabaqashi bakhe
Previous Previous post: ZIDL’EKHAYA: ISundowns izoqedela umsebenzi kwiligi
Next Next post: IMPI: UNgcobo weChiefs uthi bawafuna ephelele amaphuzu kwiLeopards